सहरी व्यवस्थापनबारे महानगरप्रमुख शाक्य र घलेबीच छलफल » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सहरी व्यवस्थापनबारे महानगरप्रमुख शाक्य र घलेबीच छलफल
मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:२३ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, जेठ ३० गते । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष शेष घलेबीच सहरी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ । सोमबार भएको भेटका क्रममा कामनपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले विदेशमा बसेका नेपालीले काठमाडौँको समृद्धिका लागि लगानी गर्ने हो भने लगानीमैत्री नीति निर्माण सकिने बताउनुभएको छ ।
नेपालको राजधानी सहर काठमाडौँको व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक सहभागिता मात्र होइन सामाजिक उत्तरदायित्वका कोणबाट पनि सहभागिता जनाउन सकिन्छ, प्रमुख शाक्यले बताउनुभयो ।
काठमाडौँमा सम्पन्नता मात्र छ, यहाँ हुने मान्छे मात्र छन् भनेर सोच्नु हुँदैन, सहरभित्रै पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिकरुपमा उत्थान गर्नुपर्ने मानिस पनि छन्, भेटका क्रममा प्रमुख शाक्यको भनाइ थियो ।
“नेपालबाट विदेश पुगेका धेरै नेपालीले २०७२ सालको भूकम्पपछि आफ्नो भूमिलाई सम्झिएका छन् । धेरै लगानी पठाएका पनि छन् । यसरी केही गर्छु भन्नेलाई वातावरण दिनुप¥यो”, सोमबार भएको भेटका क्रममा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष शेष घलेले भन्नुभयो ।
आफूले काठमाडौँको समृद्धिका लागि देखिने काम गरिरहेको बताउँदै घलेले भन्नुभयो– यस प्रकारका ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नेका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । लागत, सहभागिता, गुणस्तरलगायतका पक्षबाट साना लगानीका परियोजना र ठूला लगानीका परियोजना छुट्टै हुन् ।
भेटकाक्रममा प्रमुख शाक्य र अध्यक्ष घलेबीच सहरी सुविधा तथा सहरी व्यवस्थापनमा सम्भावित लगानीका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: खै पुन:निर्माण बसन्तपुरको ?
NEXT POST Next post: बस दुर्घटनामा शिशुको मृत्यु, चार घाइते
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:२३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:२३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:२३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:२३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:२३